Shacabka ku haray Magaalada Muqdisho oo ay la soo daristay walwal iyo Walbahaar
Iyadoo labo todobaad Magaalada Muqdisho aysan ka dhicin wax dagaalo ah ayaa haddana waxaa magaalada laga daraamayaa saansaan colaadeed oo u dhexeysa Ciidamadda Dowladda Federaalka iyo kooxaha ka soo horjeeda.
Waxaa labada dhinac ay daabulayaan ciidamo iyo Gawaarida dagaalka kuwaas oo la geynayo goobo hor leh, sidoo kale waxaa magaalada Muqdisho ku soo kordhay Koontaroolo ay labada dhinac ku baarayaan Gawaarida iyo Dadweynaha, mararka qaarkoodna waxaa la maqlayaa rasaas goos goos ah oo u muuqata mid loogu diyaar garoobayo colaad mar kale dhac.
Dadweynaha ku haray Magaalada Muqdisho ayaa haatan arrimahan ka muujinaya walwal iyo walbahaar, iyagoo ka cabsi qaba in mar kale dushooda lagu dagaalamo, waxaana shacabkaasi ka muuqata marka aad fiiriso guntooda hoose diif iyo darxumo, waayo 20-sano ah ayay waxay ku soo jireen Dagaalo iyo iska hor-imaadyo.
Ciidamo ka tirsan Dowladda Federaalka ayaa la geeyey goobo ku yaala Magaalada Muqdisho kuwaas oo u muuqda u diyaargarow dagaal, iyadoo Dowladduna ay dhowr jeer ku celcelisay in ay la dagaalami doonto kooxaha iyada ka soo horjeeda, sidoo kale Gobolada Dalka ayaa iyana waxaa ka jira abaabulo dagaal, waxayna kuwooda ugu badan ka socdaan gobolada Hiiraan, Galguduud, Bakool, Gedo iyo kuwo kale, iyadoo mas’uuliyiin ka tisan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ay sheegeen in ay iska difaaci doonaan cid kasta oo ku soo xadgudubta deegaanada ay gacanta ku hayaan, sidoo kale mas’uuliyiinta ka tirsan Dowladda Federaalka oo goboladaasi ku sugan ayaa waxay sheegeen in maalmaha soo socda ay dib ula wareegi doonaan goobihii horey ay ula wareegeen mucaaradka ka soo horjeeda Dowladda, isku wada duuboo xaalka Soomaaliya ayay Shacabku ka muujinayaan rajo beel, waxayna shacabku u muuqdaan kuwo ka daalay dagaalada doonayana in wixii khilaaf ah lagu xaliyo wada hadal iyo isafgarad.
Goobaha ay ka taliyaan Muqdisho Ururada Al-Shabaab iyo Xisbul Islaam oo uu ka hirgalay Amar ay ku soo rogeen Gawaarida dadweynaha…
Ururada Xarakatu Shabaabul Mujaahidiin iyo Xisbul Islaam oo gacanta ku haya qaybo ka mid ah Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka dhaqangalay amar ay ku soo rogeen Gawaaridda Dadweynaha ee loo yaqaano BL, waxaana amarkaasi sheegayaa in Ragga iyo Dumar la kala sooco, waliba Dumarka waxaa loo qoondeeyey in ay Gaariga ka fariistaan Kuraasta Dambe halka Raggana loo qoondeeyey Kuraasta hore.
Ururadaan ayaa goobaha ay ka taliyaan waxay ka sameeyeen Koontaroolo ay ku baarayaan Gawaarida, iyadoo gaarigii lagu helo isagoo sida rag iyo dumar aan ka soocneyn uu la kulmi doono ciqaab.
Gaari BL ah oo aan ka raacay Black Sea ayaan markaan mareyno Wasaaradda Gaashaandhiga nala joojiyey, markii Baaritaan ayaa nalagu sameeyey waxaana la arkay Haweenay dhex fadhiday Labo Rag, waxaana markiiba Amar lagu siiyey in ay dhulka u soo degto iyada iyo Dawarkiina waxaa loola baxay meel gaar ah, tashkiilin kadibna, Haweenaydii waxay ku qanacday in ay gadaal ka fariisato Gaariga.
Darawallada wada Gawaarida BL-ka ayaa si wanaagsan ugu hogaansamay amarkaasi, iyadoo dadweynaha gaar ahaan Dumar ay si weyn ugu qanceen in ay ka dambeeyaan raga, sidoo kale Dumarka ayaan loo ogoleyn in ay raacaan shirka hore ee Gaariga, waayo lama ogola in Haweenay iyo nin darawal ah wada fariistaan.
Mar aan wareysanay mid ka mid ah Haweenka Isticmaala Gawaarida BL-ka ee u ganacsi taga Suuqa Bakaaraha ayaa waxay tiri “Inkastoo ay jiraan Haween Xaamilo ah oo aan xamili Karin gadaal haddana sharciga waanu ku qanacsannahay, oo way fiican tahay in ragga iyo dumarka la kala sooco”. Amarkaan ayaa sidoo kale waxa uu ka dhaqan galay dhamaan meelaha ka taliyaan labada urur ee ka soo horjeeda Dowladda.
Waxyaabaha la yaabka leh waxaa ka mid ah in haddii Gaariga rakaabka ugu badan ee saaran noqdaan Haween uu gaarigaasi ku qasbanaanayo in uusan qaadin wax rag, sidoo kale haddii raggu ku bato waxaa qasab noqoneysa in uu rakaabsato wixii rag, oo xitaa haddi ay qof dumar ahi taagan tahay waddada waa uu ka dhaqaajinayaa.
Dowladda Federaalka iyo Ururka Ahlu-Sunna Wajameeca ee Gobalada dhexe oo kulan ku qaatay Muqdisho
Hotel Saxafi ee Magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka dhacay kullan ay isugu yimaadeen mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka iyo Ururka Ahlu Sunna Waljameeca ee ka dagaalama Gobolada Dhexe, waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay Guddoomiyaha Ururka Ahlu Sunna ee gobolada dhexe Sheekh Cumar Max’ed Faarax, waxa uuna sheegay in hadda ka hor aysan wax xiriir wada yeeleen iyaga iyo Dowladda Federaalka, balse waxa uu sheegay in muuqato saansaantii ay xiriir ku wada yeelan lahaayeen iyaga iyo Dowladda Federaalka.
“Waxaan noqonay isku hadaf, kaas oo ah in aan meel uga soo wada jeesano kooxaha naga soo horjeeda” ayuu yiri Sheekh Cumar oo sheegay in ay dagaalka sii wadi doonaan tan iyo inta ay ka sifeyn doonaan kooxahaasi oo uu ku tilmaamay in ay yihiin kuwo nabad diid ah.
Axmed Cabdi Salaan oo Dowladdii Nuur Cadde ka soo noqday Ra’isul Wasaare ku xigeen ayaa si weyn u soo dhaweeyey in ay kullan wada yeeshaan dowladda iyo ururka Ahlu Sunna Waljameeca, waxa uuna u mahadceliyey intii isku soo dubaridday kullnakaasi.
“Haddii Gobolada Dhexe ay ku sugnaadaan kooxahaasi, Xamar way joogayaan haddiise laga sifeeyo Xamar way ka sifeysmayaan” ayuu yiri Axmed Cabdi Salaan oo sheegay in haddii Dowladda iyo Ururka Ahlu Sunna iskaashadaan ay wax badan u qabsoomi doonaan.
Waxaa sidoo kale ka hadlay kullankaas Salaad Cali Jeelle, waxa uuna sheegay in Dowladda wixii haatan ka dambeeya ay il gaar ah ku eegi doonto Ururka Ahlu Sunna Waljameeca, isagoo sheegay Culimaddii laga soo gaaray Diinta Islaamka, waxa una kullankaasi kus oo gebagaboobay jawi isafgarad, waxaana la filayaa maalmaha soo socda ay kullan ka fool ka fool ah wada yeesheen Madaxweynaha Dowladda Federaalka iyo Ururka Ahlu Sunna ee ka dagaalama gobolada Dhexe.